Real Gangster Crime 5.7b Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.7b လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Real Gangster Crime
Real Gangster Crime ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ကားသူခိုး Simulator ကို။
ကြွယ်ဝသော 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်အထူးသက်ရောက်မှုများ။
နယူးမြေပုံနှင့် Quest များ!
ဒီဂိမ်းဂိုဏ်း, ရဲများကနှင့်အထူးတပ်ဖွဲ့စစ်သားအပြည့်အဝနယူးဂတ်စ်၏လမ်းများရန်သင့်အားတတ်၏။ သင့်ရဲ့လမ်းအပေါ်ရပ်တည်တဲ့သူကိုလူတိုင်းဖို့မသနားတျောမူပါပြရန်! အားလုံးလက်နက် Unlock နှင့်မြေပုံပေါ်တွင်ဝှက်ထားလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာပါ။ အဆင့်မြင့်စစ်ဘက်ယာဉ်များကိုတစ်ကြီးကျယ်သောစွမ်းအားနှင့်အတူမြို့စိုးမိုးသို့မဟုတ်အနည်းငယ်ကန်ဘော၌ရန်သူဆငျးသကျခေါက်ရန်သင့်သူရဲကောင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်!
ဟာသတစ်ခုအလင်းမှတ်စုများနှင့်အတူနယူး Quest များသင်လမ်းများပေါ်တွင် orientate နှင့်အချို့သောစတင်ပြီးငွေသားရရန်ကူညီမညျ! သငျသညျအလုပ်တွေအားလုံးကိုဖြည့်စွက်နိုင်ပါသလား? , Killing ပွတ်နယ်, ခိုးယူ, အမှုအရာကိုဖျက်ဆီး။ မဆင်မခြင်ခိုးယူကားတွေမောင်းချသင်၏ရန်သူရိုက်ကူးခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာအမြောက်တပ်နှင့်အတူသူတို့ကိုခွဲခွာ။ အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးအရာတို့နှင့်ဤကြီးကျယ်သောဂိမ်းထဲမှာအများကြီးပို။ အခုကြိုးစားကြည့်ပါ!
Real Gangster Crime အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Real Gangster Crime အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Real Gangster Crime အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Real Gangster Crime အား အခ်က္ျပပါ
game5562 စတိုး04.66k
Real Gangster Crime ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Real Gangster Crime အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.7b
ထုတ်လုပ်သူ Good Thoughts Affect
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://naxeex.com/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: DC:DA:5C:F2:32:C8:78:F8:73:57:1D:32:35:1C:95:7B:F7:8D:CF:D3
အဖွဲ့အစည်း (O): Good Thoughts Affect
Real Gangster Crime APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ